कालिकोटका नागरिकको सेवामा व्यवस्त डा. गोविन्द केसी – HostKhabar ::
राजधानी दैनिक/कालिकोट : स्वास्थ्य क्षेत्रको परिर्वतन गर्न भनी पटक–पटक अनसन बसेका डा. गोविन्द केसी यतिबेला कर्णाली प्रदेशको कालिकोट आइपुगेका छन् । सुदुरपश्चिमका विभिन्न पहाडी जिल्लामा हाडजोर्नीको निःशुल्क उपचार गर्दै हिडेका डा। केसी कालिकोटका नागरिकको उपचार गर्न गत बिहीबार आइपुगेका हुन् ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा रहेका नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिनका लागि डा। केसी अहोरात्र खटिएका छन् । आएकै दिन कालिकोटको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा पुगेका केसी, शुक्रवार हाडजोर्नी तथा नशा रोगका उपचारमा खटिएका छन् ।